Al Shabaab Oo Cagta Mariyay Saldhig Ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Yumbis ee Gobolka Gaarisa.
Al Shabaab oo weerar cusub ka fuliyay saldhig kuyaal gobolka Gaarisa.
Saturday June 22, 2019 - 11:52:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 5.0/5 Stars) Total Votes: 8
Dagaalyahanno aad u hubeysan oo katirsan ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa duulaan ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaan u dhow magaalada Gaarisa ee dhulka NFD.
Saldhigga ay ciidamada Al Shabaab weerareen wuxuu ku yaallaa deegaanka Yuumbis oo u dhow magaalada Gaarisa waxaana gebi ahaanba saldhiga lagala wareegay ciidamada Kenyaatiga.
Weerarka oo dhacay saqdii dhexe ee xalay ayaa lagusoo waramayaa in ciidamada Al-Shabaab ay hub iyo saanad milliteri oo aad u farabadan ku furteen dagaalka ciidamadi Kenyaatigana ay noqdeen kuwa dhintay iyo wax baxsaday.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaga Al Shabaab ay dab qabadsiiyeen Xarun ay shirkadda isgaarsiinta Kenya ee Safaricom ku lahayd deegaanka kadib markii ciidamadii ilaalada ka ahaa ay ka baxsadeen goobta
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii kordhisay weerarada ay ka fulineyso dhulka Soomaaliyeed ee ku jira gumeysiga dowladda Kenya waxaana dhiig bax adag uu ku socdaa ciidamada Kenyaatiga ee gudaha Soomaaliya duullaanka ku jooga iyo kuwa xoogga ku heysta dhulka Soomaalida NFD.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay Q.Midoobay walaac ka muujisay weerarada sii xoogeysanaya ee Al Shabaab ay ka geysanayso gudaha Kenya, illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixjn xukuumadda Nairobi oo ku aaddan weerarka ka dhacay deegaanka Tumbis
Maamulka 'Puntland' oo qaadacay guddiga doorashooyinka iyo metelaadda gobolka Banaadir.
Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday saldhigga ciidamada Jabuuti Ee magaalada Beledweyne.
EMBRADOORIYAADII QARNIGA 21 EE MAREYKANKA OO JIDKII BURBURTA CAGTA SAARTAY